ट्याक्स हेभन मुलुकमा चौधरी ग्रुपका परिवारैको लगानी ! - Kantipath.com
‘मेरा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो कानुनले छोडेका छिद्रहरू पहिल्याउने र यस्तरी पाइला सार्ने। ताकि मेरो विदेशी लगानीमाथि कसैले कानुनी प्रश्न उठाउन नसकोस्,’ सन् २०१३ मा प्रकाशित ‘विनोद चौधरी : आत्मकथा’ शीर्षकको पुस्तकमा चौधरीले भनेका छन्। त्यसका लागि आयकर ऐनको ‘वासिन्दा व्यक्ति’ सम्बन्धी प्रावधानलाई उनले ‘छिद्र’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
‘वर्षको १८३ दिनभन्दा बढी विदेश बस्ने नेपाली नागरिक गैरआवासीय नेपालीको रूपमा दरिन्थ्यो। उसले विदेशमा लगानी गर्न छुट पाउँथ्यो,’ चौधरीले आत्मकथामा भनेका छन्, ‘मैले यसैको फाइदा उठाउँदै वर्षको १८३ दिनभन्दा बढी विदेश बसेर आफ्नै देशको अस्थायी नागरिक बन्‍ने निर्णय गरें। आज मेरा दुई जना छोरा राहुल र बरुणले गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा विदेशको कारोबार गरिरहेका छन्।’
‘यो व्यवस्थालाई उहाँले गलत रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ,’ पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘यो व्यवस्थाले नेपालबाट विदेशमा पैसा लैजाने र त्यहाँ लगानी गर्नका लागि छुट दिएको हैन। कुनै नेपाली नागरिक १८३ दिन विदेशमा बस्छ, त्यसपछि उसले आम्दानी गर्छ भने उसले मात्रै विदेशमै लगानी गर्न पाउँछ।’ तर चौधरीले नेपालबाटै विदेशमा पैसा लगानी गरेको हुुँदा उनको दाबी ‘तर्कसंगत/युक्तिसंगत’ नभएको खनालको प्रतिक्रिया छ।
‘नबिल बैंकको विदेशी लगानीकर्ताले पाउने लाभांश रकम विदेश लगिएको छ,’ खनालले भने, ‘तर त्यो कम्पनीको मालिक त उहाँ नै हुनुहुँदोरहेछ। त्यही रकमबाट उहाँले विदेशमा लगानी गर्नुभएको हुनसक्छ। नेपालबाट लगिएको रकमलाई उहाँले विदेशमा बस्ने छोराहरूले कमाएको हो भनेर पुष्टि गर्न खोज्नुभएको छ। जुन गलत हो।’ यस आधारमा पनि चौधरी परिवारले विदेशमा गरेको लगानीको वैधतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। (विभिन्‍न तहगत कम्पनी खडा गरी चौधरीले नबिल बैंकको आम्दानी कसरी विदेश पुर्‍याए? तल बक्समा हेर्नुस्।)
‘प्यान्डोरा पेपर्स’ ले खुलासा गरेका केही कम्पनीमा लगानी गर्ने गरी राष्ट्र बैंकबाट विनोद, उनका जेठा छोरा निर्वाण र सारिकाले अनुमति नलिएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ। ‘विदेशीले ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डस्थित सिनोभेसन कम्पनीमा ५० हजार थान कित्ता सेयर गिफ्ट दिएको हुनाले त्यसमा आफ्नो नाम रहने गरी विनोदले अनुमति लिएका छन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘यसबाहेक अन्य कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्न विनोद, निर्वाण र सारिकाले अनुमति लिएको विवरण हामीले फेला पारेनौं।’ हाम्रो खोजमा पनि सिनोभेसनका लागि अनुमति लिएकोबाहेक अरू कुनै पनि विदेशी कम्पनीमा लगानी गर्न विनोदले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएको तथ्य सार्वजनिक अभिलेखमा फेला परेन।
विनोदले सिनोभेसनमा गिफ्टेड सेयर भने पनि त्यसमै परिवारका अन्य सदस्यको पनि लगानी रहेको र त्यही कम्पनीमार्फत् विभिन्‍न तहगत कम्पनी खडा गरी उनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सञ्‍जाल विस्तार गरेको प्यान्डोरा पेपर्सको विवरणले देखाउँछ। यही सिनोभेसनको अन्तिम लगानीकर्ताको प्रमाण खोज्दै राष्ट्र बैंकले नेपालस्थित नबिल बैंकको २०७६/७७ देखि उनले पाउनुपर्ने लाभांश समेत रोकिदिएको छ। ‘विदेशी लगानी भनिए पनि सिनोभेसनको अन्तिम लगानीकर्ता चौधरी परिवार नै हुनसक्ने आशंकामा करिब डेढ वर्षअघि राष्ट्र बैंक सञ्‍चालक समितिले नै निर्णय गरेर लाभांश वितरण रोकिएको हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘सिनोभेसनको अन्तिम लगानीकर्ताको विवरण उनीहरूले ल्याउन सकेका छैनन्। नल्याएसम्म लाभांश वितरण रोकिइरहनेछ।’
राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डको सिनोभेसन कम्पनी चौधरी परिवारका विनोद, राहुल र बरुणको लगानीमा स्थापित कम्पनी हो। जसमा विनोदको ०.५ प्रतिशत, बरुणको ४९.७५ प्रतिशत र राहुलको ४९.७५ प्रतिशत सेयर रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ। ‘अरू कसैले गिफ्ट सेयर दिएको र त्यहाँ लगानी गर्न विनोदले राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिएका हुन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ। चौधरीले पनि उक्त सेयरलाई ‘गिफ्टेड’ भन्दै आइरहेका छन्। तर उक्त कम्पनी विनोद र उनका परिवारले नै ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा खडा गरेको प्रमाणहरूले देखाउँछ। जसको चर्चा माथि गरिसकियो। अर्कोतर्फ सिनोभेसनमा लगानी गरेको भेटिएका विनोदकी श्रीमती सारिका र जेठा छोरा निर्वाणको हैसियत कहिल्यै पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिक रहेन। यसबाट पनि उनीहरूले नेपालको कानुन उल्लंघन गरेको देखाउँछ।
अर्बपति विनोद चौधरीको सिनोभेसन नामक कम्पनीमा ०.५ प्रतिशत सेयर रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। विनोदको यो सेयरबाट प्राप्त आम्दानी अनिवार्य रूपमा नेपाल भित्र्याउनुपर्ने दायित्व हुन्छ। तर, विनोदले त्यो सेयर बराबरको लाभांश रकम विदेश नै लगेका थिए। ‘उनी नेपाली नागरिक भएपछि उनले त्यो लाभांश नेपाल नै राख्नुपर्ने थियो,’ पूर्वअर्थ सचिव खनाल भन्छन्, ‘त्यो रकममा यहीं कर लाग्छ। उनले उता लगेर पुँजी पलायन गर्न खोजेको देखिन्छ। जसमा राष्ट्र बैंकले रोकिदियो।’
उक्त समाचारअनुसार उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले प्याराडाइज र पनामा पेपर्समा नाम भएका बङ्‍गलादेशीहरू विरुद्ध अनुसन्धान किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण माग गरेका थिए। त्यसपछि आयोगका तर्फबाट वकिल खुर्सिद आलमले पनामा र प्याराडाइज पेपर्समा नाम सार्वजनिक भएका मिन्टुसहितका व्यक्तिहरुका बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी गराएका थिए।
सिनोभेसनको वेबसाइटमा भएको विवरण अनुसार विनोद चौधरी र मिन्टु चीन, सिंगापुर, थाइल्याण्ड लगायत मुलुकमा सञ्‍चालित ‘सिनोभेसन ग्रुप’ नामक कम्पनीका संस्थापक तथा बोर्ड सदस्य भएको उल्लेख छ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रसम्बन्धी एक प्रतिवेदनले मिन्टु नबिल बैंकका प्रवर्द्धक तथा ग्रुप ए वर्गका सेयर होल्डर भएकोसमेत देखाएको छ।
सिंगापुरको ‘अकाउन्टिङ एण्ड कर्पोरेट रेगुलेटरी अथोरिटी’को अभिलेख अनुसार यो कम्पनीको निर्देशकमा राहुल चौधरी छन्। दुबईको जुमेरा आइल्याण्ड ठेगाना प्रयोग गरेका उनी सन् २०११ देखि कम्पनीमा संलग्न छन्। राहुलसँगै यो कम्पनीका अन्य निर्देशकहरूमा विनोदकी श्रीमती सारिकादेवी, जेठा छोरा निर्वाणकुमार चौधरी (दुवै नेपाली नागरिक हुन्) र कान्छा छोरा बरुण चौधरी छन्। सारिका र निर्वाणले उक्त कम्पनीमा लगानी गर्न काठमाडौं तथा बरुणले दुबईको जुमेरा आइल्याण्डको ठेगाना प्रयोग गरेका छन्।
त्यसपछि यो कम्पनीले सन् २०१५ मा सिंगापुरको सीजी हस्पिटालिटी होल्डिङ्स ग्लोबल पीटीई एलटीडीका नाममा सेयर स्थानान्तरण गरेर लगानीकर्ताबाट हटेको देखिन्छ। सिंगापुरको यो कम्पनीले २० अगस्ट २०१५ मा सीजी होटल्स एण्ड रिसोर्ट लिमिटेडमा एक अमेरिकी डलरका दरले १०० कित्ता सेयर खरिद गरेर लगानीकर्ताको रूपमा प्रवेश गरेको हो। यो कम्पनीले पहिलो चरणमा ६७ र दोस्रो चरणमा ३३ कित्ता सेयर लगानी गरेको देखिन्छ।
उनले आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरेअनुसार सुरुमा भारतमा ‘सिनोभेसनअन्तर्गत सीजी फुड एण्ड इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड’ स्थापना गरिएको थियो। ‘फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स को बिजनेस हेर्ने यो कम्पनी २०५८ सालमा आसामको गुवाहटीमा दर्ता भयो,’ उनले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्, ‘वाइवाइ प्लान्टको पहिलो साइट आसाममै छानेका थियौं। हाम्रो खास रोजाइ त सिक्किम नै थियो।’
तर, पछि चौधरीले सिक्किममा पनि प्लान्ट स्थापना गरे। ‘त्यो बेला सिक्किममा वाइवाइ प्लान्ट सुरु भएको खबरले नेपालमा एक किसिमको तरङ्‍ग थियो,’ उनले पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘यो सम्भवतः नेपाली उद्यमीले विदेशी भूमिमा सञ्‍चालन गरेको यति ठूलो स्तरको पहिलो उद्योग थियो। भारतमा लगानी गरेको भनेपछि नेपालमा अलि बढी नै हल्लीखल्ली हुने भइहाल्यो।’
विदेशमा लगानी नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन जीवित छँदाछँदै चौधरी ग्रुपले कसरी भारतमा कारखाना खोल्न सक्छ भन्‍ने कुरा उठ्यो। ‘मैले कानुनी रूपमा कुनै तलबितल हुन दिएको थिइनँ,’ उनले पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘सिक्किम कारखाना चौधरी ग्रुपअन्तर्गत होइन, सीजी फुड्स इण्डियाअन्तर्गत सञ्‍चालित थियो। र, सीजी फुड्स भनेको सिंगापुरमा दर्ता भएको सिनोभेसनकै अर्को कम्पनी हो।’
विनोदले पटक-पटक सिंगापुरको सिनोभेसनको कुरा उठान गरेका छन्, तर ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा उनको परिवारकै नाममा दर्ता रहेको कम्पनीको विषयमा भने कहीं कतै चर्चा गरेका छैनन्। विनोदले आफ्नो आत्मकथामा विदेशी नागरिक महबुब रहमान, अब्दुल अवाल मिन्टु, जल श्राफ, युसुफ मोहम्मद, कमलकिशोर शर्मा लगायत थुप्रै स्थापित उद्यमी र व्यवसायीहरूसँग साझेदार गरेर सिंगापुरमा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको जग हालेको उल्लेख गरेका छन्।
‘मैले अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारका लागि सिंगापुर छान्‍नुको मुख्य कारण कमलकिशोरसँगको निकट सम्बन्धले नै हो,’ चौधरीले आत्मकथामा लेखेका छन्। उनले अहिले सीजी ग्लोबल कम्पनी मार्फत विभिन्‍न देशमा लगानी गरिरहेका छन्। सीजी ग्रुपको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार सीजी ग्लोबल मातहतको सीजी हस्पिटालिटी परियोजना अन्तर्गत विभिन्‍न ठाउँमा होटल तथा रिसोर्टहरू सञ्‍चालन गरेको देखिन्छ। सीजी हस्पिटालिटीका लागि चौधरीले सीजी होटल्स एण्ड रिसोर्ट नामक व्यवस्थापनको काम गर्ने कम्पनी खोलेको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार जिंक नाममा चीनमा २, श्रीलंकामा ३ र भुटानमा १ होटल सञ्‍चालनमा छन्। यस्तै, भारतमा पनि सोही नाममा चौधरीले होटल विस्तार गरेको देखिन्छ। विनोदले सीएनबीसी अफ्रिकालाई सन् २०१६ मा दिएको अन्तर्वार्तामा पूर्वी अफ्रिकामा उनले ६ वटा होटलमा लगानी गरिरहेको बताएका थिए। त्यस्तै अमेरिकाको जेएफके एयरपोर्टमा होटल (पहिले हिल्टन पछि र्‍याडिसनको नाममा स्तरोन्‍नति)मा लगानी गरेको उल्लेख गरेका थिए। उनले होटल क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड ताज होटलमासमेत विभिन्‍न ठाउँमा साझेदारी गरी होटल तथा रिसोर्ट स्थापना गरिसकेका छन्।
उल्लिखित आरोपहरूमाथि चौधरी ग्रुपले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल र विदेशी कानुनको उल्लंघन नगरेको जनाएको छ। ‘मेरा बुवा एवम् सीजीका अध्यक्षका अनुसार सिनोभेसन र हाम्रा सबै कम्पनी समूहले विदेशी लगानी सम्बन्धी नेपाली कानुनसहित लागू भएका सबै कानुन पालन गरेका छन्। त्यसैले तपाईंको इमेलमा उल्लिखित अनुसन्धान सम्बन्धमा हाम्रा थप टिप्पणी र विचार छैनन्,’ खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि वासिङटन पोस्टका पत्रकार पीटर होरिस्कीले सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै राहुल चौधरीले भनेका छन्।
सीजीले सम्मानित, प्रतिष्ठित र अग्रणी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग साझेदारी गरेको उनको भनाइ छ। ‘जहाँसम्म हाम्रो लगानीमा साझेदारहरूको कुरा छ, सीजी र यसका कम्पनी समूहमा विश्वस्तरमा सम्मानित, प्रतिष्ठित र अग्रणी बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग हाम्रो साझेदारी छ। उनीहरूका बारे सार्वजनिक डोमेनमा जानकारी सहजै उपलब्ध छ,’ राहुलले इमेलमार्फत् प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘हामी आफ्ना साझेदार विरुद्धका आरोपबारे टिप्पणी गर्न चाहँदैनौं। यसबारे तपाईंलाई कुनै प्रश्न गर्नु छ भने सीधै उनीहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस्।’
Previous Previous post: स्रोत नखुलेको १५ लाखसहित ३ जना पक्राउ
Next Next post: प्यान्डोरा पेपर्स : अहिलेसम्मकै ठूलो खुलासा ! १६ नेपालीको ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकमा लगानी
सगरमाथा निकुञ्ज कब्जा गरेर निजी होटेल
आर्थिक वर्ष २०६७/०७७ को बजेट : सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्यो